Amaphepha eMonsanto-Ilungelo laseMelika lokwazi
I-Roundup (iGlyphosate) yezeMeko zoMhlaza: Amaxwebhu aphambili kunye nohlalutyo
(Skrolela ezantsi ukuze ubone amaxwebhu Umjongi weTrial Rounder uhlaziyo oluneenkcukacha.)
Nge-24 kaJuni, i-2020 Bayer AG ithe izakuhlawula ngaphezulu kwe- $ 10 yezigidigidi ukulungisa amashumi amawaka amabango e-US aziswe eMonsanto ngaphezulu kwamabango Roundup kunye nezinye i-glyphosate herbicides ezithengiswe yinkampani zibangela uhlobo lomhlaza obizwa ngokuba yi-non-Hodgkin lymphoma (NHL) . Isindululo esicetywayo yeza kwiminyaka emibini emva kokuba uBayer ethengile iMonsanto nge $ 63 yezigidigidi kunye nonyaka omnye emva kweJaji yeSithili sase-US uVince Chhabria yalelwa Bayer / Monsanto ukungena kulamlo kunye negqwetha labamangali. Indawo yokuhlala ibikhona uxakeke kubunzima, batsale izikhalazo kubamangali abebelinde iminyaka nokuba lusuku enkundleni okanye imbuyekezo. Ngelixa uninzi lweefemu zamagqwetha ziye zafikelela kwizivumelwano zokuhlala kunye neBayer, uninzi lwabanye alunakufika ngoMatshi 2021.
Ukuhlaziywa kwenkundla yase-Federal
Ngokwengxelo ka-Bayer kaJuni ka-2020, inkampani yayihlawula i-10.1 yezigidigidi ukuya kwi-10.9 yezigidigidi zeedola ukusombulula malunga neepesenti ezingama-75 zamabango ngabantu abaqikelelwa kwi-125,000 abathi batyholwa ngababulali bokhula bakaMonsanto babangela ukuba baphuhlise i-NHL. Esi sivumelwano sibandakanya abamangali abagcinayo amagqwetha ngenjongo yokufaka isimangalo kodwa amatyala abo engekafakwa, utshilo uBayer. Intlawulo ye- $ 8.8 yezigidigidi ukuya kwi-9.6 yezigidigidi yabekelwa ukusombulula isimangalo sangoku.
U-Bayer ucebisa ukuhlawula i-2 yezigidigidi zeedola ukwenza inkqubo eneenkcukacha eza kusingatha amabango anokubakho exesha elizayo. Indawo yokuhlala yenzelwe ukubuyekeza abantu abaye bavezwa kwiimveliso zeRoundup kwaye sele benayo iNHL okanye banokuphuhlisa i-NHL kwixa elizayo, kodwa abangekathathi manyathelo okufaka isimangalo.
Isicelo sokuqala senkampani sokusingatha amabango exesha elizayo sakhatywa nguMgwebi Chhabria ngaphezulu kwenkxalabo ebandakanya umzamo kaBayer wokuseka ipaneli yesayensi yokufumanisa ukuba ngaba i-Monsanto's glyphosate-based herbicides ibangela i-non-Hodgkin lymphoma endaweni yezigqibo zejaji kuloo mbuzo.
NgoFebruwari 2021 Bayer kunye neqela lamagqwetha asebenza neBayer wafaka isicelo esitsha Ngenkundla kaChabria ijolise ekusingatheni amabango exesha elizayo, kodwa eso sicwangciso satsala kwangoko inkcaso ebanzi ukusuka kumagqwetha olingo ajikeleze i-United States, abatyhola ukuba bayayiphumeza
Isigqibo sika-Bayer sokusombulula isimangalo salandela amatyala amathathu ase-US, enye kwinkundla yomanyano kwaye ezimbini kwiinkundla zikarhulumente. Inkqubo ye- Ityala lomanyano yimeko kaEdwin Hardeman V. Monsanto. Elo tyala lahlulwa-hlulwa ngokwesicelo seMonsanto, kuthintela ubungqina bamagqwetha abuva ngexesha lesigaba sokuqala ukuya kwisizathu kuphela. Ngo-Matshi 19, 2019 a Isigqibo sejaji wanikezela uloyiso kumjikelo wokuqala kuHardeman, njengoko amalungu amajaji amathandathu afumanisa ukuba ukubonakaliswa kukaHardeman kwiRoundup "yinto ebalulekileyo" ekubangeleni i-non-Hodgkin lymphoma. Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi 27 ijaji yabuya isigwebo esimalunga ne-2019 yezigidi zeedola, kubandakanya nomonakalo ozohlwayayo we- $ 80 yezigidi. UMgwebi Chhabria ncitshiswa Umonakalo owohlwayo onikwe uHardeman ukuya kwi-20 yezigidi zeedola ukusuka kwi-75 yezigidi zeedola, ebeka ibhaso lilonke ku $ 25,313,383.02. Amaxwebhu enkundla / okufumanisa athunyelwe apha ngezantsi ukwenzela Edwin Hardeman V. Monsanto.
Cofa apha ukuze amaxwebhu ongezelelweyo ngokubhekisele kumatyala e-MDL adibeneyo
funda Amaxwebhu angaphakathi eMonsanto Njengenxalenye yenkqubo yokufumanisa ngexesha lesimangalo esandulela ukuhlala, iMonsanto kwafuneka iguqule izigidi zamaphepha eerekhodi zayo zangaphakathi. Amaphepha eMonsanto kunye nezinye iirekhodi zenkundla kwabelwana ngazo apha ngezantsi, kubandakanya namaxwebhu ngokubhekisele ekubhaleni ghost kwiphepha elibalulekileyo elipapashwe ngonyaka ka-2000, kunye nendlela inkampani eyalusebenzisa ngayo olo ncwadi "luzimeleyo" lwenzululwazi ukukhuthaza nokukhusela iyeza lokubulala ukhula.
Ukuhlaziywa kwenkundla kaRhulumente
Amawakawaka abamangali benze amabango afanayo nxamnye neMonsanto kwiinkundla zikarhulumente. Inkqubo ye- Ityala lokuqala kwityala leRoundup igqitywe ngo-Agasti 10, 2018 kunye isigwebo sejaji Ukhula kokhula eMonsanto kwaba negalelo elibonakalayo ekubangeleni umhlaza kaDeWayne “Lee” Johnson, nokuyalela uMonsanto ukuba ahlawule i-289.25 yezigidi zeedola kumonakalo, kubandakanya i-250 yezigidi zeedola kumonakalo owohlwayayo. Ijaji yanciphisa umonakalo owohlwayo ukuya kwi-39 yezigidi zeedola ngokomyalelo we-Okthobha 22, 2018 ebeka isigwebo esipheleleyo malunga ne- $ 78 yezigidi. UMonsanto wabhena, efuna ukusilahla isigwebo, ngelixa uJohnson wafaka isibheno, efuna ukubuyisela ibhaso lejaji. Inkqubo ye- I-California yeNkundla yesiBheno yokuBhena kwicala likaJohnson ekufumaneni ukuba kukho ubungqina obaneleyo bokubonisa ukuba umhlaza wakhe ubangelwe kukuvezwa yimithi yokubulala ukhula kaMonsanto, kodwa inkundla yehlisa imbasa yakhe yomonakalo kwi- $ 20.5 yezigidi. U-Bayer uhlawule uJohnson ngasekupheleni kuka-2020.
Olona vavanyo lwamva nje belukhona UPilliod V. Monsanto. Ngomhla we-Meyi 13, 2019 ubuyise isigwebo Ukunikezela ngeAlva kunye neAlberta Pilliod $ 2 yezigidigidi kumonakalo owohlwayo kunye ne- $ 55 yezigidi kumonakalo ohlawulelwayo. Ijaji kwityala emva koko yasinqumlisa isigwebo sisonke ukuya kwi-86.7 yezigidi zeedola. I-Pilliod v. IMonsanto yayiyeyokuqala kwityala le- Inkqubo yokuQuquzelelwa kweKhansile yeJaji yaseCaliforniaJCCP) kunye necala lesithathu lomhlaza we-Roundup lokuqhubeka nokulingwa. IMonsanto yabhena isigwebo kwiNkundla yesiBheno yaseKalifornia yokuqala. Inkqubo ye- inombolo yetyala A158228.
IiPilliods zifayilishwe isibheno esinqamlezileyo. Bona iinkcukacha kule khonkco.
Inkundla yaseburhulumenteni / amaXwebhu okuFumanisa
Isindululo-sexesha-elithile-kwifayile-yokuphendula- kucetywayo- eklasini-yokuhlala.pdf (03.30.21)
Iphepha leKabat-kwi-glyphosate.pdf (03.29.21)
I-Monsanto-intshukumo-yokususa-uChris-Portier-kunye-nokukhuphela ngaphandle ubungqina bakhe.pdf (03.29.21)
Isifundo esitsha-Ukubonakalisa-kwi-glyphosate-kunye nomngcipheko-weNHL.pdf (03.29.21)
Iphepha le-crump-on-glyphosate-analysis.pdf (03.29.21)
Ingxelo ye2021-Ingcali-uChris-Portier-1.pdf (03.29.21)
Uluhlu lweeCervantes-zoluhlu-lweengcali-amangqina.pdf (03.19.21)
AmaXwebhu Enkundla KaRhulumente
UWinston, et al. UMonsanto
Isichaso seMonsanto kwizigqibo ezizodwa kuFleishman Hillard amaxwebhu (10.16.19)
Izichaso zeMonsanto kwisigqibo esikhethekileyo sokulawulwa kwamaxwebhu e-FTI Consulting.pdf (10.07.19)
Isindululo sokumiselwa kwetyala.pdf (10.07.19)
Isichaso seMonsanto kwizigqibo ezizodwa ze-master re.pdf (10.04.19)
- + - + - + - + - Loading ... NTSHABILE (10.03.19)
Ijaji iyaliphika ityala kwi-county.pdf (10.02.19)
Isindululo sokuseta ukulingwa kwe-19SL-CC04115.pdf (09.24.19)
Umyalelo weJaji odlulisela abamangali bakaWinston kwi-county.pdf (09.13.19)
Ukunika ingxelo kunye nohlalutyo
I-Roundup Trial Tracker blog, NguCarey Gillam (USRTK) (ehlaziywa rhoqo)
I-imeyile ibonisa i-Monsanto i-GOP imizamo yokwesabisa abaphandi bomhlaza (I-Intercept) (8.23.19)
Kutyhilwe: njani 'indawo yezobuntlola' kaMonsanto ejolise kwiintatheli kunye nabaphembeleli (UMgcini) (8.8.19)
Ndiyintatheli. IMonsanto yakha iqhinga ngenyathelo ngenyathelo lokutshabalalisa igama lam (UMgcini) (8.9.19)
Bayer / Monsanto Silencing Journalists, Amatshantliziyo, kunye Nososayensi, (Inethiwekhi yeendaba eyiNene) (8.13.19)
IMonsanto ithathelwa ingqalelo “njengezenzo zomthetho” ngokuchasene noNeil Young, iNgcaciso eNtsha yeNgxelo (I-Pitchfork) (8.10.19)
Ilawula njani iMonsanto intatheli kunye nezifundiswa (UMgcini) (6.2.2019)
I-EPA yenzelwe ukusikhusela. Uvavanyo lweMonsanto lubonisa ukuba ayenzi loo nto (UMgcini) (5.7.19)
Ngubani ohlawula ulwaphulo-mthetho lukaMonsanto? Singo (UMgcini) (3.30.19)
Ijaji ifumana isicwangciso sokuzikhusela sikaBayer: iingcali (Bloomberg) (3.20.19)
IMonsanto: I-Roundup ebalulekileyo kumhlaza womntu, ijaji ifumana kwisigwebo esiphambili (UMgcini) (3.19.19)
Glyphosate : izimvo Monsanto mène sa guerre médiatique, Par Stéphane Foucart et Stéphane Horel (Le Monde) (1.31.19)
'Ihlabathi liBachasile': Ixesha elitsha leCancer Lawsuits lisongela uMonsanto, Ngu Sam Levin kunye no Carey Gillam (Guardian) (10.8.18)
Amaphepha eMonsanto, Ngu-Stephanie Matshi (iAustralia Broadcasting Corporation) (10.8.18)
Indima kaMonsanto kwi-Roundup yoFundo loKhuseleko ilungiswa yiJenali, NguJoel Rosenblatt, uPeter Waldman noLydia Mulvany (Bloomberg) (9.26.18)
Ibali eliLandela ukuLingwa koMhlaza weMonsanto -Izinto zeJenali kuRhoxiso, NguCarey Gillam kunye noNathan Donley (Iindaba zeMpilo yezeNdalo) (8.22.18)